I-siding eshibhile: ama-nuances okukhethayo
Isakhiwo ngasinye sidinga ukugcinwa nokulungiswa okuvamile, futhi yilezi zinqubo namuhla ukuthi inani elikhulu lokuklama nokuqedela lenziwe. Umklamo wangaphakathi ngaphakathi kwesikhumba noma isakhiwo sobuciko isakhiwo esikhulu somsebenzi, uhlu olubandakanya ukukhetha izinto zokuqeda. Ngendlela okuhle imikhiqizo izokhethwa ngayo ukulungiswa, umphumela wokugcina kanye nokuphila kwezinto ezikhethiwe kuzoxhomeka. Kunzima kakhulu ukukhetha izinto zokuqeda ukubhekana nesakhiwo sobuciko besakhiwo, ngoba yingxenye yangaphandle yayo evezwe inani elikhulu lemiphumela emibi, futhi ngokuvamile kuyadingeka ukuthenga imikhiqizo "isamba esiyindilinga". Indlela yokunciphisa ubuciko obuhle futhi obuphezulu besakhiwo futhi ngesikhathi esifanayo ngentengo engabizi? Yeka ukuthi ungahambi kanjani "ngokungalungile" ngesikhathi sokulungisa?
Ukudutshulwa eshibhile - ukukhetha okuhle kakhulu kwabanikazi abathandekayo
Uma kuqedwa ukuphothulwa okuphuthumayo, isibonelo, i-plaster iwa phansi noma imidwebo ibonakala ngaphakathi kwesakhiwo, kuyadingeka ucabange ngokushicilelwa kwesakhiwo, izigxobo, izingxenyana zamakamelo kanye nengxenye yangaphandle yesakhiwo. Enye yezindlela eziwusizo zokuqeda impahla akuyona isihlahla (ngenxa yesisindo sayo, ikakhulukazi) hhayi isitini, kodwa okulula, okulula nokusebenzayo. Ukuqakatheka kwalo ukuthi kuhlanganiswe ngendlela esheshayo. Amaphaneli wezinhlobo ezahlukene anezilinganiso zawo kanye nobukhulu bawo, kodwa anamathele esithombeni futhi azinze phakathi kwabo ngokusebenzisa ukuxhumana okuyisisekelo esikhethekile.
Amaphaneli walolu hlobo afaka ububanzi obukhulu bezinhlobo, phakathi kwazo kukhona izinhlobo ezinjalo zokwakha njenge:
Ukufakwa kwemishini kanye nokufakwa kwe-keramosiding.
Umzila oshibhile ovela kuleso sikhombandlela sokuhlonywa yi-vinyl, futhi kuwukuthi kunesidingo esikhulu phakathi kwabathengi.
I-Vinyl siding - inenzuzo futhi iyasebenza
Kodwa yikuphi ukufaneleka kwalolu hlobo lokubheka kokugcina? Yiziphi izici zayo nezinzuzo? Ukubheka okungabizi kungaba yikhwalithi futhi inokwethenjelwa, futhi lokhu yilokho okulinganisa amaphaneli e-PVC. Ngokuvamile ubukhulu balesi sidonga bububanzi obude bamamitha amathathu kuya kwangu-4 ubude, nobubanzi bama-20 noma angu-25 amasentimitha. Ukuqina kwemikhiqizo enjalo ngokuvamile akudluli kujwayelekile ka-10 mm. I-profile vinyl siding ilula kakhulu ukuyisebenzisa, njengoba ayidingi ukunakekelwa okukhethekile, njenge-fiber-samente noma ukubukeka kwe-metallic.
Isici esiyinhloko salesi sihloko ukuthi yi-80% ye-polyvinyl chloride. Ngenxa yalesi sigaba, kungathatha izinhlobo ezihlukahlukene, imibala namasayizi. Ngokuqondene nezimfanelo zayo eziyisisekelo, ukubhekwa okunciphisa kunezinzuzo eziningana, okwakuzithandana nabathengi.
Okokuqala, isakhiwo sayo ngenxa ye-PVC ikuvumela ukuba ugcine isimo sokuqala kunoma yiziphi izinguquko zezulu (isithwathwa, ukushisa, imvula, iqhwa). Amaphaneli awaqhubeki, ungaphazamisi. Ngenxa yokungabi nalutho kwezakhi zensimbi, ama-panel awakwazi ukubola noma ukuhlaselwa kwezinambuzane. Ngaphezu kwalokho, ama-panel we-vinyl yanamuhla awashisi, kepha aphethwe kuphela. Kuyinto elula kakhulu ukusebenzisa uhla oluncane olunjalo oluhlangene nama-heaters.
Izinzuzo zama-panic vinyl
Imikhiqizo eyenziwe nge-PVC ibilokhu idumile ngezimfanelo zayo ezinhle kakhulu. Ngakho-ke, isibonelo, isici sokuqala salolu hlobo lwempahla ukuthi ashibhile. Ukudonsa i-vinyl kunenani eliphansi kakhulu, ngisho nokuqhathaniswa nezinkuni, izitini nezitini. Iyunithi yokulinganisa lapho kubalwa inani lezinto zokwakha kanye nezindleko zabo kuthathwa njenge-rub rub. I-1 pc. Ngokwesilinganiso, intengo enjalo eshibhile iyaguquka kusuka ku-100 ukuya ku-400 ruble ngalinye. Kodwa ngaphezu kwamanani ayo aphansi, ukudonsa i-vinyl kunezinzuzo ezimbalwa:
Ukumelana nokushisa (-50 kuya +50 degrees).
Ukumelana nezimo ezihlukahlukene zezulu, izinguquko, umswakama.
Akudingi ukunakekelwa okukhethekile, ngaphandle kwalokho kulula ukusebenza. Uma kunesidingo, kulula ukuhlanza.
Ngenxa yezimbobo ezikhethekile ezansi kwephaneli, i-condensate evela ku-heater ayitholi.
Izinkanyezi zokubheka okungabizi
Kodwa asikwazi ukusho ngama-nuances wokukhetha izinto ezinjalo. Owokuqala uhlobo olulula lomonakalo. Kwanele ku-frost eqinile engozini engxenyeni eshibhile yento, njengoba yenza ngokushesha umonakalo. Uma kukhona ukushaywa, kuzokwephula. Kubalulekile ukucabangela ukukhunjulwa okukhulu ezindaweni lapho umoya ovunguzayo uvunguza khona: ama-vinyl ne- socle panels ahlinzekela izimbobo, futhi lezi zakhi zingaba "iphiko lomoya" kalula futhi uma kwenzeka ukugijimela okuqinile nje kuphuma ngaphandle kodonga. Yiqiniso, ama-nuances angabonwa futhi abukeka kahle kakhulu: uma umninimkampani omkhulu futhi omkhulu efuna ukulungisa isakhiwo, lohlobo oluthile oluncane lwempahla aluhambisani - luzokwehlisa kakhulu isimo senkampani emehlweni omakhasimende angase abe khona.
I-Vinyl inezinhlobonhlobo zayo
Ungathenga indawo eshibhile eSt. Petersburg kanye nesinye isibonelo, isibonelo. Amapaneli e-PVC awafanelanga kahle? Khona-ke kufanele unake ukunakekelwa kwendawo engaphansi. Kuthengeka futhi kungathengwa enhloko-dolobha enyakatho yeRussia. Ngokwalo, ukusikhipha isondo kuyinhlobo yamapaneli e-vinyl. Ukuzikhethela kwalezi zinto zokuqeda ukuthi bavame ukulingisa ukugoqa komkhumbi, kodwa ukukhanda ngamatshe noma isitini semvelo. Ubude obuvamile bezinto ezinjalo ngu-80 cm, futhi ukufaka kuhlukile ekukhoneni kwe-vinyl. Lezi zinto zivame ukusetshenziselwa ukuhlobisa izindonga nezinye izindawo, kodwa futhi zithola isikhala esikhumbeni sezingaphandle zangaphandle. Izinzuzo eziyinhloko zalesi sihloko ukuthi ukukhanya kakhulu. Ngokuvamile ukudonsa umsila kufakwe ngisho naseleyili. Ikakhulukazi ethandwa ngamakamelo amanzi, amabhati, ama-saunas, njengoba engabonakaliswa kumswakama. Futhi, yebo, kubonakala ngokufakwa okusheshayo nokulula.
Sikhetha ukudonsa. Iyiphi inketho yokuyeka?
Uma umthengi ebalulekile ukuthi inani lentengo nekhwalithi, ke-ke, kunjalo, ukulingana kwe-vinyl efanelekile. Kungathengwa ngezezimali kuzo zonke izitolo zokwakha, njengoba lokhu kuyindlela ethandwa kakhulu futhi ethandwayo yezimpahla ezivela emgqeni wezinto zokuqeda. Futhi, inzuzo yamaphaneli e-vinyl ukuthi banombala obala kakhulu wombala - kuwo wonke amathrekhi nombala. Amamodeli athandwa kakhulu asemhlophe, nge-texture ngaphansi kwesihlahla. Okokuqala, amapaneli anjalo abukeka emuhle kakhulu, futhi okwesibili, ngisho nokusebenza isikhathi eside (iminyaka engu-30 noma ngaphezulu), ukushisa kombala akubonakali kakhulu. Iphuzu elibaluleke kakhulu ekukhetheni ukucubungula lilula. Ngokuvamile kuyadingeka ukuba ungagcini ingxenye ethile yesakhiwo, kodwa sonke isakhiwo, ngakho-ke kulokhu kubalulekile ukuthi ukhethe ngqo lokho okungeke kuphazamise ukubhekelana kwesakhiwo, futhi ngalesi simo amaphakheji e-PVC ayindlela enhle.
Noma yiluphi uhlobo lokugaya lunezinhlobo zalo zokugaya, okusho ukuthi ukufakwa kwalo kuzohlale kuhlukile. Ukukhetha uhlobo oluthibhile lokudonsa, okungukuthi i-vinyl, inothi ukuthi ukuhlelwa kwamapaneli kungaba kokubili okuqondile futhi okugxilile. Uma kukhonjisiwe okuyi-horizontal, ukufakwa kuvela phezulu phansi, futhi uma uhlangothi, ungasebenza kunoma yikuphi uhlangothi olukhethiwe (kwesokudla noma kwesobunxele).
Uma umnikazi wendlu engaziwa ekufakeni i-siding, kungcono ukubeka umsebenzi enkosini. Ngokuvamile kufanele wenze izilinganiso ezicacile, ukuze iphaneli ingene ngokucacile ku-groove. Uchwepheshe useduze wonke amathuluzi adingekayo kulo msebenzi, kanye nesethi edingekayo yolwazi. Ochwepheshe emkhakheni wokuhlobisa kanye nokubhekwa kwama-facade kuzosula kalula noma yikuphi ukungena futhi kungabhekana kalula nalokhu noma leyo nkinga evelayo.
Indlela yokwenza ukushisa okuzimele endaweni yokuhlala. Ukushisa okuzenzakalelayo efulethini: intengo, ukubuyekezwa
Ukufudumala kwendawo eyimpumputhe nesisekelo nge polystyrene eyandisiwe
Ukufaka inguquko kumadokhumenti we-LLC kanye nama-constituent
Adume Tokaj iwayini: ukubuyekeza amamaki
Inqubo ukuzingela nobuntu izingulule. Ubude gxuma ingulule
Uyini enhle? ekahle yokuziphatha
Yiluphi ulimi olukhulunywa e-Egypt? Trip ku umlando futhi namuhla